RFID Transparent အရောင်အသွေးစုံသော PVC Card ကို, RFID အရောင်အသွေးစုံသော Transparent ပလတ်စတစ်ကဒ်, RFID အရောင်အသွေးစုံသော PVC Clear ကိုကတ်, RFID အရောင်အသွေးစုံသောအားရှင်းလင်းရန် PVC Card ကို
RFID Transparent အရောင်အသွေးစုံသော PVC Card ကို, ရောင်စုံ Transparent ပလတ်စတစ်ကဒ်
အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်း Card ကို RFID အရောင်အသွေးစုံသောအားရှင်းလင်းရန် PVC Card ကို, RFID အရောင်အသွေးစုံသော PVC Clear ကိုကတ်, RFID အရောင်အသွေးစုံသော Transparent ပလတ်စတစ်ကဒ်, RFID Transparent အရောင်အသွေးစုံသော PVC Card ကို
ပွင့်လင်းအရောင်ပလပ်စတစ်ကဒ်, upscaling, စတိုင်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှုများအဘို့အကောင်းတစ်ဦးအထောက်အဖြစ်ပါသည်.
frequency: 125kHz, 13.56MHz, 860~ 960MHz
chip မော်ဒယ်: Mifare 1k S50, Mifare S70 4K, Mifare Ultralight10, Mifare Ultralight ကို C, ငါကုတ် SLI ကို / SLI ကို-S က / SLI ကို-L / SLIX, Mifare Desfire2K / 4k / 8K, Ti2048, EM4102, EM4200, EM4305, EM4450, TK4100, T5577, CET5500, Hitagl, Hitag2, Hitags, Mifare PLUS 2K / 4K, FMl208(စီပီယူ), ဂြိုလ်သား h3, etc ။.
အရောင်များ: အနီေရာင်, စိမ်းလန်းသော, ပြာသော, ပန်းရောင်, ဝါသော, လိမ္မော်သီး, ကနေရှေးခယျြဖို့အနက်ရောင်
PVC ကဒ်ထူ: 0.2/0.25/0.3/0.38မီလီမီတာ
ကဒ်အရွယ်အစား: 85.6× 54mm, စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား, ပုံသဏ္ဌာန်, သို့မဟုတ်အထူ
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -20℃ ~ + 85 ℃
ပွင့်လင်းရောင်စုံ PVC Card အားအသုံးပြုမှုကိုပွင့်လင်းရောင်စုံ PVC ပစ္စည်းဖန်ဆင်းထားသည်, ဒေသခံပွင့်လင်းနောက်ကျောမျက်နှာပြင်ကဒ်ပေါ်မှာ, ပုံစံကိုလက်မှတ်ထိုးနိုင်ပါတယ်, လိုဂိုပွင့်လင်းရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့, အပြည့်အဝပွင့်လင်းစေနိုင်သည်စရှိနိုင်ပါသည်, အလွန်ဇိမ်ခံကြည့်, ပွင့်လင်းကဒ်ကိုလည်းခုံးကုဒ်ကစားနိုင်ပါတယ် (သေးငယ်တဲ့ခုံးကုဒ်သို့မဟုတ်ကြီးမားသောခုံးကုဒ်) ကိုရွှေသို့မဟုတ်ငွေအပူနှင့်လက်မှတ်ချွတ် add, လိုအပ်ချက်နှင့်အညီလည်းဘားကုဒ်ပုံနှိပ်နိုင်ပါတယ်, နှင့်သံလိုက် strips တွေ,စသည်တို့ကို.
လက်ဆောင်ပေးမယ်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်, ကုန်တိုက်ကြီးတွေလျှောက်ထား, ဟိုတယ်များ, ဘား, စားသောက်ဆိုင်, ကဖေး, ရုပ်ရှင်ရုံ, အလှပြင်ဆိုင်, အသားတင်ကဖေး, ဂိမ်းကအခန်း, ဝန်ဆောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အခြားဒေသများ.
ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန် RFID Transparent အရောင်အသွေးစုံသော PVC Card ကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်, ရောင်စုံ Transparent ပလတ်စတစ်ကဒ်
prev: PET ပစ္စည်းအမြင့်အပူချိန် Card ကို, PET ပစ္စည်းအနိမျ့အပူချိန် Card ကို
နောက်တစ်ခု: Teslin ပစ္စည်း RFID Chip ကဒ်